Ungawaphepha njani amadoda e-cellulite | Amadoda aseStylish
Indlela yokuphepha amadoda e-cellulite
UAlicia tomero | 07/11/2021 13:13 | Ukunyamekela, Kufanelekile, Ukutya, ZeMpilo
Amadoda nawo uphethwe cellulite. Akukho mzimba unokuxhathisa amanqatha oyikekayo engingqi, ide ibonakale ngokumangalisayo kumadoda abhityileyo. Ukuba ungomnye waba bantu banomdla wokudala i-cellulite, apha siya kukunika iingcebiso ezilungileyo ukuphepha la mafutha.
Kukho ipesenti ephantsi yamadoda aphethwe yi-cellulite ngokubanzi emzimbeni wabo. Kuphela i-10% ihlupheka kuyo xa kuthelekiswa nabasetyhini kunye nakuwo wonke umzimba wabo. Kwakhona ibonakala emilenzeni, indawo yesisu, iimpundu kunye neengalo kwaye inokuba ngenxa yengxaki yehomoni, indlela yokuphila engafanelekanga ebandakanya ukutya okungenamsoco.
1 Injani i-cellulite kumadoda?
2 Indlela yokuthintela i-cellulite
3 Kukuphi ukutya okucetyiswayo?
4 Imidlalo kunye nomsebenzi ngawona mahlakani abalaseleyo
5 Ezinye iindlela zonyango ukuphepha i-cellulite
Injani i-cellulite kumadoda?
Iseli Yiyo ukuqokelelana kwamafutha ehlala kwiimaleko ezinzulu zolusu. Ngokuqhelekileyo kwenzeka ngenxa yokusetyenziswa ngokugqithiseleyo kwamafutha okanye ngenxa ukutsha kwekhalori ephantsi eziguqulwa zibe ngamafutha. Amadoda adla ngokuyiqokelela kwiindawo ezifana nesinqe kunye nesisu.
Sukuhlala nento yokuba amadoda angenayo i-cellulite, kuba uninzi lunayo. Kodwa kuyinyaniso ukuba basusa amanqatha abonwabileyo ngcono kakhulu. Abasetyhini bane-estrogens eninzi kwaye amadoda angaphantsi kakhulu. Le nto ibanceda ukuba bangaqokeleli amanqatha kwiindawo ezithile zomzimba wabo, njengakwi amathanga nezinqe. Ukongeza, i-testosterone ephezulu emadodeni inceda ukunyibilika oko kutye amanqatha ngcono kakhulu.
Ukubunjwa okanye ukwakheka kwesikhumba yamadoda yahlukile. Iingqimba ezinzulu zolusu zenziwe ngeekhamera ezithe nkqo kwaye yiyo loo nto bethanda ukuqokelela amanqatha ngcono kakhulu. Amadoda anala magumbi akhiwe kwiiyunithi ezincinci kunye ne-diagonally, ngoko amanqatha asasazwa kakhulu ngakumbi.
Indlela yokuthintela i-cellulite
Amadoda kunye nabasetyhini banokuba namaqhinga abo amancinci okuthintela i-cellulite. Ekugqibeleni, i-morphology ukusuka kumzimba omnye ukuya komnye ayifani kakhulu, kodwa kufuneka songeze ukuba zininzi. iindlela ezingcono zokuthintela kunye nokulwa amafutha.
Eyokuqala kuzo zonke kukuzama ukugcina Ukutya okunempilo. Utywala kunye nokutshaya yinto yokuqala ekufuneka ilahlwe njengesiqhelo. Amafutha, ngakumbi ahluthayo kunye neeswekile kufuneka zisuswe ekutyeni.
Uxinezeleko ngomnye unobangela oko kubangela ukuba inkqubo yethu yokusebenza iguqulwe. Utshintsho lwengqondo lubangela ukuba umzimba ugcine amanqatha kwiimeko ezininzi, okwenza kube yindawo.
Kukuphi ukutya okucetyiswayo?
Nangona siye sayihlolisisa loo nto amafutha amaninzi kunye neecarbohydrates favour cellulite, kukho ukutya okunceda ukwenza okuchaseneyo. Iziqhamo, imifuno kunye nemifuno zifanelekile ukuze ungafaki amanqatha. Kodwa ezinye ezinje ngeapile, itswele, ithanga, ipayinapile okanye iasparagus ziphantsi kwisodium kwaye zizityebi kwi potassium, zifanelekile. ukunceda ukupheliswa kolwelo.
Ukutya okutyebileyo kwifiber bathanda ukuhamba kwamathumbu kwaye banxulumene nokuthintela i-cellulite. Iingqolowa ezipheleleyo, imifuno kunye neziqhamo zizityebi kweli candelo. Zonke iititrus Izityebi kwivithamin C kunye nokutya okutyebileyo kwivithamin E nazo ziyimfuneko ekuthinteleni amanqatha.
Kufuneka ugcine umzimba umanzi kakhuluOku kuthetha ukusela ukuya kutsho kwiilitha ezimbini zamanzi yonke imihla. Phakathi kwezi ziselo unokubandakanya ijusi yendalo okanye i-infusions efana neti eluhlaza, i-horsetail okanye i-sage.
Imidlalo kunye nomsebenzi ngawona mahlakani abalaseleyo
Kufuneka uvule Ngenxa yokuba indlela yokuphila ehlala phantsi yeyona nto ilungileyo yokubonakala kwe cellulite. Umdlalo ulungile kuba uyanceda sebenzisa ukujikeleza kwegazi kunye ne-oxygen emzimbeni wonke. Olona qheliselo lungcono olugcina ubunzima bomzimba bungekho kukubaleka, i-aerobics, ukuqubha, kunye nokukhwela ibhayisekile.
Ukuba uyathanda imithambo ephezulu ungazama ezihlala ixesha elide ezixutywe nokuqina okuphakathi kwe-aerobic. Kufuneka zibe ziiseshoni apho zixutywa khona Imizuzu engama-20 yokuzilolonga yokuqina okuphezulu kunye nokuthambileyo ukuze ukwazi ukuchacha. I-Sprint, uchungechunge lwe-squats, imiphunga, i-multi-jumps, uchungechunge lokukhwela kunye nebhayisikili.
Ezinye iindlela zonyango ukuphepha i-cellulite
Kukho amadoda asebenzisa i i-electrostimulation yemisipha ukuhlala kufanelekile. Iquka ukusebenzisa umsinga wombane ukuze ubangele ukuncipha kwemisipha. Yimvakalelo efanayo xa ingqondo ithumela iimpembelelo kwi-central nervous system ukulawula iintshukumo zezihlunu.
Iimasaji zifanelekile ukwenza kusebenze ukujikeleza kunye nokususa onke amanqatha asekuhlaleni. Kukho ii-anti-cellulite creams ezinokuthi zongezwa kolu hlobo lwe-massage. Kwelinye icala, kukho kwakhona i-lymphatic massage, i-pressotherapy kunye ne-mesotherapy. Zonke zinceda ukukhupha ulwelo olugciniweyo emzimbeni.
Ezi zezinye zeendlela zokulandela xa ufuna ukuthintela i-cellulite. Musa ukuthatha iikhalori ezininzi kunokuba unokuba negalelo kumzimba wakho Kwaye ukwenza umthambo kusisiseko sokugcina umzimba ongenamafutha. Ungalibali ukuba ukutya okunempilo, okunamafutha aphantsi kuya kunceda kakhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Kufanelekile » Ukutya » Indlela yokuphepha amadoda e-cellulite